Manual arc Welding is ibizwa kanjalo ngoba zonke izenzo ezidingeka UWelder Uchwepheshe ngesandla. Yena unesibopho ukuvusa futhi bathole arc, ukunyakaza arc loxhumana naye kwi isikhawu edingekayo, ukunikezelwa electrode abahlungi abasha esikhundleni sokuthi esetshenziswa. izinga Weld kuncike ikhono UWelder. Udinga ngokushesha kokhela arc, ukuqapha eduze ukuze ubude bayo babuyizingalo okufanayo, kanye ukukhiqiza Welding umfaniswano izingxenye ezimbili.
MMA has a ngezigaba ezithile. Ngokwesibonelo, ngokuvumelana nenani electrode esetshenziswa ukushisela ukuhlukanisa elilodwa noma amabili electrode, kanye multi-electrode. Kukhona ezintathu okhombisa nasezakhini isigaba arc, umlingisi bamanje bangaba AC noma i-DC.
Welding Okwamanje okwandile nge kushintshana noma yamanje eqondile usebenzisa electrode consumable. Yiqiniso, kunezindlela eziningi ezahlukene zokuxhuma ucezu ngu Welding. Ngokwesibonelo, ukwakha izinhlobo ezahlukene amalunga omzimba (imiphetho flanged). Ukuze kwandiswe umkhiqizo Kunconywa ukusetshenziswa electrode ugongolo, futhi Welding Alloys ahlukahlukene nezinsimbi non-ayoni kukhona electrode tungsten.
MMA has a yokukhiqiza inqubo ethize. Lapho zisetshenziswa Welding electrode izingxenye ezahlukene, okungaba consumable futhi nonconsumable. Lo mqeqeshi owake wapheka tingentiwa wire nge enamathela ekhethekile. sishaye okunjalo kubalulekile ukuze ngezinga eliphezulu ukuzinza the arc kagesi unikeze amanyela ebusweni zensimbi oxides evikela pool weld kusuka nokuxhumana imvelo, futhi nokuvikela arc kusuka endaweni nokuxhumana emoyeni.
Manual TIG Welding engenziwa ngesikhathi izimo ezihlukahlukene ambient bese kuthi amagesi ahlukahlukene. Ngokwesibonelo, manual argon-arc Welding (endaweni ka argon), Welding emoyeni futhi t. D.
Ngokusho GOST 9466-75, le electrode zihlukaniswe izinhlobo eziningana.
1. ngu aphoyintimenti:
ne-carbon ongaphakeme-ingxubevange lezinsimbi kwesakhiwo;
ukushisa ukumelana ingxubevange steel;
ephezulu ingxubevange lezinsimbi kwesakhiwo.
2. Ngokwenkolelo uhlobo brand:
3. Njengoba ukushuba we enamathela wafutha:
4. ngu enamathela uhlobo electrode:
lokunameka yensimbi powder.
5. kuvunyelwe isikhundla kwezendawo electrode:
nganoma yisiphi, ngaphandle mpo Welding mqulu;
ngokuba ovundlile ephansi futhi indiza mpo;
6. polarity umsinga Welding esetshenziswa:
7. ngu ubunjalo bamanje Welding:
MMA kusikisela ukuthi metal okuyinto ashiselwe electrode, kumele abe Ukwakheka kwamakhemikhali elihambisana izidingo zawo. Izimfanelo mechanical okuholela weld futhi weld metal ke kumelwe alethwe ku-ngokuvumelana GOST 9467-75.
A amazwi ambalwa ngalokho kurediyetha kangcono